इँटाविना पनि अब सुरक्षित पर्खाल बनाउन सकिने
अब इँटाविना पनि सुरक्षित पर्खाल बनाउन सकिने भएको छ। गोर्खा प्रिकास्ट एण्ड विण्डोर प्राइभेट लिमिटेडले ठूला ठूला साइजका गोर्खा बाउण्डरी वालको उत्पादन सुरु गरेपछि पर्खालका लागि इँटाको विकल्प थपिएको छ।
विण्डोरले घर, कार्यालय वा कारखानाको चारैतिरको कम्पाउण्ड घेर्नका लागि विभिन्न साइजका ठूला ठूला बाउण्डरी वालको उत्पादन थालेको छ।
यो पर्खालको चौडाई एक फिट हुन्छ भने आवश्यकता अनुसारको लम्बाई राख्न सकिने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन दुवालले जानकारी दिए।
‘साधारण ६ आनाको घरको कम्पाउण्ड यो सामाग्रीको प्रयोगबाट चार पाँंच दिनमै बन्छ’ उनले भने, ‘जबकि इँटाको प्रयोग गरी बनाउने हो भने महिनौं लाग्नसक्छ।’
यसको प्रयोगबाट कम्पाउण्ड बनाउँंदा पछि भत्काउनु परे पनि पुनः प्रयोग गर्न सकिने र जग पनि धेरै हालिरहनु नपर्ने कम्पनीको दाबी छ।
कसरी बन्छ त पर्खाल ?
पर्खाल बनाउनको लागि दुईतिर ग्रुभ भएको ‘एच विम’ गाड्नु पर्छ। जसको निम्ति दुई फिट लम्बाई, दुई फिट चौडाई र दुई फिट गहिराई भएको खाल्डो खन्नु पर्छ। त्यसमा आधा बोरा सिमेन्ट बराबरको ढलान भरेर आठदेखि दस फिटको दुरीमा ‘एच विम’ उभ्याउनुपर्छ ।
त्यसपछि दुईटा एच विमको बीचमा पचास एमएमको गोर्खा बाउण्डरी वाल जडान गरिन्छ। आवश्यकता अनुसार एचविमको ग्रुभ र प्यानको बीचमा पियफोम राख्न सकिने दुवालले बताए।
के छ त बिशेषता ?
यो पर्खाल बनाउँदा निर्माणस्थलसम्म परम्परागत पर्खालका लागि जस्तो इँटा, वालुवा, गिटी, सिमेन्ट लानुपर्ने झन्झट हुँदैन। यसका लागि पानीको आवश्यकता समेत पर्दैन। यो जडानका लागि निर्माण क्षेत्रमा दक्ष कामदार समेत आवश्यकता नपर्ने दुवालले बताए।
यो पर्खाल नौ इन्चका परम्परागत पर्खाल भन्दा बलियो तथा सुरक्षित हुने कम्पनीको दावी छ। भूकम्पको बेला पर्खालहरु भत्केर दुर्घटना हुँदा पनि यो अरुभन्दा सुरक्षित भएको कम्पनीको दाबी छ। यो निर्माणबाट पर्खाल बनाउँंदा प्लाष्टर गरिरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्छ।
कम्पनीको अनुसार यो निर्माणमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ स्वदेशी हुन्छ। इको फ्रेण्डली र प्राकृतिक श्रोतसाधन कम मात्रै प्रयोग हुने यो वाउण्डरी बनाउन प्रयोग हुने मेसिनमा क्लिन इनर्जी मात्रै प्रयोग हुने जनाइएको छ।
भूकम्पपछि कम्पाउण्ड वाल बनाउँदा पाँंच फिट भन्दा उचाईको बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। तर यसमा सजिलै फलामको काँंडेबार जडान गर्न मिल्ने हुन्छ।
इँटा, ब्लक, जस्ता, काँंडेबार भन्दा बढी सुरक्षित र बलियो भएको दुलालको दावी छ। यो बनाउँदा ढलानकै बने पनि बीचमा प्वाल हुने भएकोले यसको घनत्व ३५ प्रतिशतसम्म कम हुने उनले बताए।
इँटाको पर्खालमा जस्तै दुईदेखि तीन फिट जग हाल्न आवश्यक नहुने, डेकोरेशन गर्न परे सिधै वाल पटी र पेन्ट गर्न मिल्ने, तीन फिटसम्म माटोको ‘अर्थ प्रेसर’ धान्न सक्ने यसका विशेषताहरु हुन्।
कम्पनीले यसका अलावा एक सय २० एमएमको फलोरको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने पिस्टेस पिकास्ट हलो कोर स्ल्याब तथा यूपीभीसी र आल्मुनियमको झ्यालढोका पनि बनाउँंदै आएको छ। यो पर्खाल बनाउन चाहनेले ९८५११९३१९४ सम्पर्क गर्न सक्ने छन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २८, २०७४, ०७:०५:५१